Puntland oo sii daysay rag loo haystay Al-shabaab-nimo – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2015 7:09 b 0
Talaado, Oktoobar 27, 2015 (Daljir) —Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Gobolada Bari,Karkaar,Sanaag,Hayland iyo Gardafuu ayaa siidaysay eedaysanayaal ku eedaysnaa arrimo Alshabaabnimo oo ay maxkamaddu kuwayday eedaymihii loohaystay sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Cabdifataax Xaaji Aadan.
Waxaana ay kala ahaayeen eedaysanayaashaasi:
1-Nuunow Maxamed Madnuur.
2-Maxamed Maxamuud Xassan.
3-Cali Nuur Macalin
4-Bashiir Cabdi Dirir.
5-Axmed Yaasiin Xirsi.
6-Kayse Maxamed Cabdullaahi Faarax Ciidanka Daraawiishta Puntland.
7-Dable Bashiir Siciid Muuse Ciidanka Daraawiishta Puntland.
8-Dable Cabdiraxmaan Daahir Axmed Ciidanka Daraawiishta Puntland